ပြင်သစ် လီးဂူးဝမ်း ပြိုင်ပွဲ ရပ်နားလိုက်ရပါပြီ…?? – MySport Myanmar
ပြင်သစ် လီးဂူးဝမ်း ပြိုင်ပွဲ ရပ်နားလိုက်ရပါပြီ…??
ပြင်သစ် ဝန်ကြီးချုပ် အီဒူအာ ဖီလစ်ပီ (Edouard Philippe) ကတော့ အမျိုးသား ညီလာခံ (National Assembly) ကျင်းပခဲ့ကြတဲ့ အချိန်မှာ ပြင်သစ်နိုင်ငံက ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲတွေ အားလုံးကို ယခုနှစ် စက်တင်ဘာလ မတိုင်ခင် ကျင်းပခွင့် မရှိဘူးလို့ အတိအလင် ပြောကြားသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံက ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲတွေကို စက်တင်ဘာလ မတိုင်ခင်အထိ ကျင်းပခွင့် မရတော့မှာ ဖြစ်တာကြောင့် ပြင်သစ် လီးဂူဝမ်း ပြိုင်ပွဲ နဲ့ ပြင်သစ် လီးဂူးတူး ပြိုင်ပွဲကို ရပ်နားရတော့မှာ ဖြစ်ပြီး ပြင်သစ် ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် အနေနဲ့ အခုအချိန်အထိ ဘာကိုမှ တုံ့ပြန်ထားခြင်း မရှိသေးပါဘူး။
ပြင်သစ် ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်သူ ဖီလစ်ပီက “ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲကြီးတွေကို စက်တင်ဘာလမတိုင်ခင် ကျင်းပနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ (၂၀၁၉-၂၀) ဘောလုံး ရာသီ ပြန်မလာနိုင်တော့ပါဘူး”လို့ တရားဝင် ပြောသွားခဲ့တာကြောင့် လက်ရှိရာသီ လီးဂူးဝမ်း ပြိုင်ပွဲကို လုံးဝ ရပ်နားလိုက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လီးဂူးဝမ်း ဖလားကို ဘယ်အသင်းက ရမလဲ၊ ဘယ်အသင်း တန်းဆင်းရပြီး ဘယ်အသင်းက တန်းတတ်ရမလဲ၊ ဘယ်အသင်းက ဥရောပ ပြိုင်ပွဲတွေကို ဝင်ခွင့် မရလဲ ဆိုတာကို လာမယ့် မေလမှာ ကျင်းပမယ့် “LFP အစည်းအဝေး”မှာ ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်သွားကြတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတင်မကဘဲ အာဂျင်တီးနား ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် (Argentina Football Association) ကတော့ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ် ရောဂါကြောင့် အာဂျင်တီးနား ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲကို ရပ်နားလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်လို့ အတည်ပြုခဲ့ပြီး တန်းဆင်းအသင်းတွေ ရှိမှာ မဟုတ်ဘူးလို့လည်း အတည်ပြုသွားလိုက်ပါတယ်။ အာဂျင်တီးနား ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဖြစ်သူ ကလော့ပ်ဒီယို တာပီယာ (Claudio Tapia) က “ကျွန်တော်တို့ ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲကို ရပ်နားလိုက်ရပါပြီ။ ပြိုင်ပွဲကို အသစ်ကနေ ပြန်စဖို့အတွက် စိတ်ကူးထားပါတယ်”လို့ ဒေသခံ သတင်းတွေကို အခိုင်အမာ ပြောကြားသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ အာဂျင်တီးနား ပြည်တွင်း ပြိုင်ပွဲ၊ နယ်သာလန် ပြည်တွင်း ပြိုင်ပွဲ နဲ့ ပြင်သစ် ပြိုင်ပွဲတွေ အားလုံးကို ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ် ရောဂါကြောင့် ရပ်နားလိုက်ရပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
MySport Myanmar2020-04-28T21:16:24+06:30April 28th, 2020|Football, France Ligue 1, News|